Chishandiso chinokwanisa kuvhura chero iPhone nechisimba brute ye $ 500 | IPhone nhau
Chishandiso chinokwanisa brute simba kuvhura chero iPhone kune $ 500
Kuwana kuvhura iPhone kuburikidza nechokunze mudziyo, kugura chinouraya harisi basa riri nyore asi pane sarudzo yekuzviita kwe $ 500 uye kumwe kutsungirira. Ini ndinoti kushivirira nekuti kana tichifanira kutsanangura manhamba matanhatu manhamba ekushandisa pasi apa chishandiso ichi chinogona kutora gore rese, asi kana paine makodhi manhamba mana anogona kuwanikwa mumazuva mashoma.
Isu zvakare tine vhidhiyo chiratidzo chekuti ichi ndechechokwadi uye kuti zvinokwanisika kushandisa ino sosi kuvhura chero iPhone pane yazvino iOS vhezheni. Zvekare isu tinofanirwa kufunga kuti ichi hachisi chimwe chinhu chiri nyore kuitisa uye chinodiwa kuti iyo iPhone ibatanidzwe kumuchina kwechinguva kuitira kuti ikwanise kuwana kodhi.
Pamusoro pechigadzirwa pachacho, chatisingazoise chinongedzo kuchinyorwa chino, iwe unoda mukana wakanaka wekushivirira uye nezvimwe kana iyo iPhone iine kodhi yekuvhura manhamba matanhatu. Pane rimwe divi kana mavara akawedzerwa mukuwedzera kunhamba, kuvhura zvinoita zvisingaite.
Icho chisimba simba rekuzarura chinhu chiri nyore kutsanangura. Ndiro iyi yakabatana neiyo iPhone zvazvinoita ndeye kushandisa zvese zvinokwanisika kusanganiswa kwenhamba kuti uwane mudziyo uye nekudaro zvinoda nguva, asi Izvi hazvireve kuti hazvigone kuvhurwa kana kuti gomba rekuchengetedza haripo ... Isu tinosiya vhidhiyo yeanozivikanwa YouTube chiteshi che EverrythingApplePro saka unogona kuona mashandiro anoita ino system:
Kukosha kwekugara ikozvino
Tinogona kudzivirira izvi kuti zvisaitike pane yedu iPhone? Hongu. Izvi zvinogona kudzivirirwa sekureba sekunge mudziyo uchiramba uchivandudzwa kune yazvino vhezheni inowanikwa yeIOS, mune ino kesi iri yayo. Apple yakataura kuti kukanganisa kwekuchengeteka kunowedzerwa muIOS 11.
Dambudziko kana gomba rekuchengetedza nderekuti iOS 10 haina muganho wekuyedza pawakangochinja password yekuvhura, ndiko kuti, hazvidziviriri kana kudzima data kubva kuiyo iPhone (mushure megumi kuedza kusabudirira kuisa kodhi) uye nekudaro mudziyo unogona kuwanikwa.
Asi Ko zvakadii nezveavo vashandisi vasingakwanise kugadzirisa yavo iPhone kune iOS 11? Zvakanaka, musimboti yekuwedzera alphanumeric password inogona kunge iri yekutanga yezvipingamupinyi zveichi chishandiso, asi ingori kodhi inodarika manhamba mana - chimwe chinhu chatove chakajairika mukutanga kumisikidzwa- inogona kukwana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 10 » Chishandiso chinokwanisa brute simba kuvhura chero iPhone kune $ 500
Pasi pezuva akadaro
Mhoroi, chinyorwa hachina kunaka. Iyo iPhone 7 chete ndiyo iri panjodzi.
Vanotsvaga Pfuma, yemahara graphic adventure yenguva shoma
Vhidhiyo yakazara yeiyo jailbreak mharidzo yeApple Watch yave kuwanikwa